Nwere ike ịhazi ya n’enweghị mgbatị ahụ? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Otu esi adaba na-enweghị mgbatị - azịza nye nsogbu ndị ahụ
Otu esi adaba na-enweghị mgbatị - azịza nye nsogbu ndị ahụ
Nwere ike ịhazi ya n’enweghị mgbatị ahụ?
Planks, push-acha ọkụ, squats, jumping jacks na nzọụkwụ-elu bụcha ụzọ niile dị mmanwetana-agagharị! Mee oge mgbatị ụlọ. Ihicha ụlọ bụ n'ezie ụzọ dị mmanwetana-agagharị. Lelee calorie oleị nwere ikegbaa onwe gi aru site na iji ihe oru mbo a ime ulo.03/16/2020
Kedu ka esi adaba n'ụlọ na-enweghị mgbatị ahụ?
Jide n'aka na mgbatị ahụ ike gị na-ekpuchi ahụ ike niile dị na ahụ gị, ahụ gị, obere ahụ, azụ na azụ. Gbaa maka usoro atọ nke 10-15 ugboro ugboro nke mgbatị ume ọ bụla. N'agbanyeghị ụdị mmega ahụ ị na-eme, jide n'aka na ị ga-amalite nwayọ nwayọ nwayọ wee nwekwuo oge mgbatị gị na ike gị.
Ga-aga mgbatị ahụ iji nwee ahụike?
Inweta uru ahụike site na mmega ahụ dị mfe karịa ka ị chere, ọ bụghịkwa na-efu ogwe aka na ụkwụ. Ime ma ọ dịkarịa ala minit 150 kwa izu iji rụọ ọrụ ọkụ ọkụ zuru ezu iji mee ka ahụ dị gị mma. Ọ bụrụ na mgbatị ahụ abụghị ihe gị, enwere ọtụtụ ihe omume dị ala ị nwere ike ime n'onwe gị nke nwere ike ịme gị ka ọ dị.
Kedụ ka m ga - esi mee akwara na - enweghị mgbatị ahụ?
Rụ ọrụ mmega ahụ ndị a n'ụlọ na-enweghị akụrụngwa nwere ike inyere gị aka imeta ahụ siri ike na nke a kpụrụ akpụ na-esonyere mgbatị ahụ. Ndị a enweghị mgbatị ahụ bụ usoro dị irè nke enwere ike ịme na nkasi obi nke ụlọ gị.